News - Sublimation ebi akwụkwọ usoro
Gịnị bụ sublimation ebi akwụkwọ usoro
Sublimation nyefe-ebi akwụkwọ mbụ na-eji ebipụta ebipụta pụrụ iche na-ebi akwụkwọ e ji esiji ákwà na nyefe akwụkwọ, na mgbe heats na presses nyefee e ji esiji ákwà na-akwa. Kpọmkwem, ọ dabere na njirimara nke sublimation nke na-achụsakwa akwa, họrọ kesaa dyes na sublimation okpomọkụ nso nke 180 ~ 240 ℃, ma gwakọta ya na slurry iji mee ụcha agba. Dị ka usoro dị iche iche na usoro achọrọ si chọọ, Ep ~ J, A na-ebipụta ink agba na mpempe akwụkwọ mbufe, ụkpụrụ ahụ na ụkpụrụ a na-ebipụta akwụkwọ na-akpachi anya na akwa ahụ, a na-ebufe agba ahụ site na akwụkwọ obibi akwụkwọ na akwa ahụ nhazi na igwe eji ebufe mbufe na 200 ~ 230 ℃ maka 10 ~ 30s. Mgbe mgbasa gasịrị, ọ na-abanye n'ime ime akwa ahụ iji nweta nzube nke agba. Na usoro nke kpo oku na sublimation, iji mee ka e ji esiji ákwà ka ọ gbasaa n'ụzọ ziri ezi, a na-esekarị agụụ n'akụkụ n'akụkụ ala nke ihe eji esiji iji nweta mgbasa ozi na ịnyefe nke e ji esiji ákwà ma melite ogo mbufe.
Uru nke T-uwe elu omenala sublimation usoro: ezigbo obibi akwụkwọ mmetụta
Mgbe T-shirt customization chọrọ ndị dịtụ siri, e ji esiji ákwà sublimation usoro bụ ezi nhọrọ. The ákwà e biri ebi site na e ji esiji ákwà sublimation nyefe technology nwere ezi ihe nakawa etu esi, na-enwu gbaa na agba, ọgaranya ma doo anya na n'ígwé, elu nka, na ike atọ akụkụ mmetụta. O siri ike ibipụta ya na usoro izugbe, wee nwee ike ibipụta foto na eserese ụdị eserese.
Uru nke uwe ejiji omenala T-shirt: ngwaahịa a na-ebipụta na-adị nro ma nwee ogologo ndụ ọrụ.
Akụkụ kachasị ukwuu nke mbufe sublimation nyefe bụ na agba nwere ike ịgbasa n'ime polyester ma ọ bụ eriri, na ngwaahịa e biri ebi na-adị nnọọ nro na ntụsara ahụ, na enweghị isi mkpuchi. Na mgbakwunye, n'ihi na ink akpọnwụlarị n'oge usoro mbufe ahụ, ndụ nke ihe oyiyi ahụ dị ka ndụ nke uwe ahụ n'onwe ya, ọ gaghị enwe akwa na akwa nke eserese ebipụtara, nke ga-emetụta ịma mma nke akwa ahụ .